Ogaden News Agency (ONA) – Baxsadka Ciyaaryahanka & Siyaasiyiinta Itoobiya oo Siibadanaya.
Baxsadka Ciyaaryahanka & Siyaasiyiinta Itoobiya oo Siibadanaya.
Warbixnio ala duwan ooy kasoo diyaariyeen qaar kamid ah saxaafada caalamka ayaa lagu sheegay ineey maalinba maalinta kadambaysa siibadanayaan ciyaartooyda Itoobiya ee wadanka ka baxsanaya kuwaasoo magangaliyo siyaasadeed waydiista qaar kamid ah wadamada reer Galbeedka sida Maraykanka iyo Yurub.
Warbixin dheer oo lagu soo daabacay wargayska caanka ah ee layidhaahdo The Gurdian oo baxsadka ciyaaryahanka Itoobiya warbixin dheer kaqoray ayaa sheegay ineey dhibaatooyin kala duwan oo lagu sameeyay darteed ku kaliftay ineey qoysaskoodii iyo wadankoodii hooyo eey ku dhasheen iskaga cararaan.
Sida ay warbixintu sheegtay qaar kamid ah ciyaaryahanka Itoobiya ayaa musqulaha isku sooxidhay si ay uga hadhaan diyaaradii ay Itoobiya u raaci lahaayeen iyagoo ka cabsi qaba hadeey Itoobiya kulaabtaan ineey lakulmi doonnaan ciqaabtii iyo jidh dilkii horaan ay jala kulmeen Sirdoonka & Nabadsugida Gumaysiga Itoobiya oo tacadiyo badan kuhaya shacabka Itoobiya.
Waxay warbixintu intaas raacisay ineeysan baxsadku ku ekayn oo kaliya ciyaar yahanka Itoobiya balse ay siyaasiyiinta, suxufiyiinta iyo ganacsatada Itoobiya dhibkan oo kale lawadaagaan. Waxaa sanadihii lasoo dhaafay kor usii kacaya qaybaha ala duwan ee shacabka Itoobiya ee ka baxsanaya dhibaatooyinka lagu hayo een kala joogsiga lahayn. Shacabka Somalida Ogadenya oo dhibaatooyinka kuwaas kadaran lagu haya ayaan xataa loo ogolayn ineey saxaafada madaxa banaan cagta galiso wadanka Ogadenya oo lamid noqday Jeel balaadhan oo korka ka furan.